ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဂိတ်တံခါးမဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်း - MM Live News
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဂိတ်တံခါးမဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်း
တနေ့တွင် ဒုတိယတပ်ရင်းမှူးဗိုလ် မှူးကပ်ကျောင်းက ကျွန်တေ့ာကိုခေါ်သဖြင့် ဗိုလ်မှူးကပ်ကျောင်း၏ ရုံးခန်း သို့ ဝင်သွားရ၏။ ထိုနေ့က ကျွန်တေ်ာ၏ တပ်စိပ်က တပ်ရင်းလုံခြုံရေး တာဝန်ယူပြီး ကင်းစောင့်နေရသည်။ ဗိုလ် မှူးကပ်ကျောင်းကို အလေးပြုပြီး ရပ်နေသည်နှင့် ဗိုလ်မှူးကပြောသည်။
“တိုက်ချွန်း … ဒီနေ့ တပ်ရင်းကို ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းလာလိမ့်မယ် မင်းရဲ့ကင်းတပ်ဖွဲ့က တန်းစီအလေးပြု ရမယ် ၊ ထုံးစံအတိုင်း ခါးပါတ်၊ဖိနပ်၊သေနတ်တွေ တိုက်ပြီး စည်းကမ်းတကျ အလေးပြုပါစေ”
“ဟုတ်ကဲ့ … ဗိုလ် မှူး”
“နေ့လည်ပိုင်းလောက် ပဲ အချိန်တေ့ာ တိတိကျကျ ပေးမထားဘူး”
“ဟုတ်ကဲ့ … ဗိုလ်မှူး အစစအဆင်ပြေပါစေ့မယ် ”
“ကောင်းပြီ၊ ဂရုစိုက်ပါ၊ မင်းသွားနိုင်ပြီ”
ကျွန်တေ်ာသည် ဒုတိယတပ်ရင်းမှူးကို အလေးပြုပြီး ထွက်လာခဲ့သည် ။ လမ်းလျှောက်လာရင်း လုပ်ဆောင် ရမည့် တာဝန်တွေကို စဉ်းစားလာသည်။ စနစ်တကျ အလေးပြုအောင် ရဲဘေ်ာတွေကို ညွှန်ကြားရမည်။ ခါးပါတ် ၊ဖိနပ်၊သေနတ် တွေကိုပြောင်နေအောင် တိုက်ခိုင်းရမည်။ အရေးအကြီးဆုံးက တပ်ရင်း အဝင်အဝမှာ အမှိုက် တစ မရှိအောင် တံမြက်စည်းလှည်းထားရန်ဖြစ်၏။ ပြောင်ပြောင်ရှင်းရှင်းနှင့် မြင်ရသူ စိတ်ကျေ နပ်သွားအောင် ကြိုးပမ်းရမည်။ ဒါတွေကို စိတ်ထဲမှ အကွက်ချ နေ၏။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ကားပေါ်မှဆင်းသည်နှင့် ကင်းတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကို ခံယူလိမ့်မည်။ ထိုသို့ အလေးပြုခံနေစဉ် တပ်ရင်းတံခါးဝကို မျက်စေ့ကစားကြည့်လျှင် အမှိုက်တပင်မျှ မရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ တာဝန်ပေးလိုက်သော ရဲဘေ်ာက ပေ့ါပျက် ပျက်လုပ်နေရင်ခက်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တေ်ာကိုယ်တိုင် တံမြက် စည်း ဝင်လှဲလိုက် လေသည်။
ဒါမှမဟုတ် ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကားက တပ်ရင်းရုံးသို့ တန်းပြီး မောင်းဝင်သွားမလား၊ ဗိုလ် ချုပ်ဆိုတေ့ာလဲ ရှေ့ကား၊ နောက်ကားနှင့် ကိုယ်ရံတေ်ာ ရဲဘေ်ာတွေ ပါလာလိမ့်မည် ။ ကားတွေ တန်းစီပြီးတေ့ာသာ မောင်းဝင်သွားလျှင် တို့တပ်ရင်း ဝင်းဝမှာ သန့်ရှင်းလှပနေတာလေးမှ မြင်သွားရပ့ါမလား။
ကျွန်တေ်ာသည် အမျိုးမျိုး တွေးတောရင်း စိတ်မောနေမိလေသည်။ သို့သေ်ာ တခုတေ့ာ ကျေနပ်၏၊ ဗှိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကို မြင်ရတေ့ာမည် မို့ ဝမ်းသာမိသည်။ ကျွန်တေ့ာ အဖို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတင်းစာ ထဲမှာ ပင် မြင်ဖူးသူမဟုတ် ၊ သတင်းစာဖတ် ရအောင်လဲ ထိုစဉ်က အိန္ဒိယမှ ပြန်လာကာစ မြန်မာစာကိုပင် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖတ်သည့်အကျင့်မရှိသေး။
မွန်းတည့် ၁၂နာရီခန့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တေ်ာသည် ကင်းရုံးကလေး၏နောက်ဘက်တွင် ရပ်နေသည် ။ ကိုယ့် ယူနီဖောင်းကို ကိုယ် ပြန်ငုံ့ကြည့်သည် ။ ပြောင်လက် နေသော ခါးပါတ်ခေါင်း၊ အရိပ်ပေါ်နေအောင် တိုက်ထား သော စစ်ဖိနပ်၊ ခေါက်ရိုးမကျိုးအောင် တောင့်တင်းနေသော စစ်ယူနီဖောင်း နှင့် ကျေနပ်သည် ။ ထိုစဉ်ခဏ ကင်းစောင့်ရဲဘေ်ာက ကျွန်တေ့ာကို ချင်းဘာသာစကားဖြင့် လှမ်းပြောသည် ။
“ဆရာ … ဟိုမှာ လူတယောက်လာနေတယ်”
“ဘယ်မှာလဲကွ” ကျွန်တေ်ာ မျက်စေ့ကစားရင်း ပြန်မေးလိုက် ၏၊ တပ်ရင်းဝင်းဝမှ လမ်းကိုတားထားသော ဝါးလုံးတန်း အနီးတွင် လူလတ် ပိုင်းအရွယ် လူတယောက်ကိုတွေ့ရလေသည် ။ ကင်းရဲဘေ်ာ၏ အဖြေကိုမစောင့်ပဲ ကျွန်တေ်ာသည် ဝင်းဝသို့ ပြေးထွက် သွား၏။ လူတယောက် ပါပဲ ဖျင်ပင်နီ၊ တိုက် ပုံအကျ င်္ီနှင့် ချည် ပုဆိုးအကွက် ကြီးဝတ်လို့ သူ့ခေါင်းမှာ ဖေ့ာဦးထုပ် တလုံးဆောင်းထားသည်။ လက်ထဲမှာ တုတ်ကောက်တချောင်း။ ထိုလူက …
“ရဲဘေ်ာ .. ရဲဘေ်ာ .. ကျုပ်ဝင်ခဲ့ချင်တယ် ”
ကျွန်တေ်ာက ” ခင်ဗျားဝင်ခွင့် မရှိဘူး၊ ကျွန်တေ်ာတို့ လူကြီးတယောက် လာဖို့ ရှိတယ် ၊ ဒီလမ်းလယ် မှာ မရပ်ပါနဲ့၊ လမ်းဘေးကိုသွားပါ”
ကျွန်တေ်ာ အတေ်ာပင် စိတ်ခုသွားသည် ။ ဘယ်နဲ့ဗျာ မြေကြီးမှာ ခြေရာ မထင်အောင် လှဲကျင်းထားသော ဝင်းဝ အလယ် ၌ သူကရပ်လို့၊ တုတ်တချောင်းကမြေကြီးမှာ ထောက်ထားသေး။ ဒုက္ခပါပဲ ခြေရာမထင်အောင် လှဲထားတဲ့ နေရာတေ့ာ ခြေရာတွေ ပွကုန်တေ့ာမှာပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လာတဲ့ အခါ ပွရှုပ်နေတဲ့ ခြေရာတွေ နဲ့ ဒီလမ်းကိုမြင်ရင် ကျွန်တေ့ာအပေါ် အပြစ်ကျ တေ့ာမှာ ဧကန်ပါပဲ။ ကျွန်တေ်ာသည် ဒီလိုတွေးပြီး ထိုသူကို လက်ကာပြနေပါသည် ” မလာနဲ့ မလာနဲ့ လမ်းဘေးမှာနေပါ”
ကျွန်တေ်ာက ထိုသို့ မျက်ကလဲဆန်ပြာပြောနေသည်ကို ထိုသူက ခပ်အေးအေးပင် ပြုံးကြည့် နေ၏။ ပြီးတေ့ာမှ ” မဟုတ်ပါဘူး အထဲဝင်ချင်လို့ပါ”
သူကပြောရင်းဆိုရင်း ရှေ့တိုးလာသည် ။ ကျွန်တေ်ာကလည်းတာဝန်အရ အရေးတကြီးပင် တားနေ၏။
” ဟေ့လူ ဘယ်လိုလဲ၊ ပြောနေတာ မရဘူးလား၊ ဒီမှာမနေပါနဲ့ ကျုပ်တို့ လူကြီးတယောက်လာမယ်၊ ဘေးမှာနေပါ”
“မေဂျာကပ်ကျောင်းရှိသလား၊ ရှိရင်တွေ့ချ င်တယ်၊ မေဂျာကပ်ကျောင်းကို သွားခေါ်ပေးပါ၊ သူ့မိတ်ဆွေက တွေ့ချ င်တယ်လို့ ပြောပါ”
“မြတ်စွာဘုရား ဘယ်လိုလူနဲ့ လာတွေ့နေပါလိမ့်” ဟုတ်စိတ်ထဲ တွေးနေမိပါသည်။ တကယ့် ဇွတ်သမားပါလား၊ အတင်းဝင်မယ်လုပ်ပြီး ဝင်မရတေ့ာ၊ ဗိုလ် မှူးကပ်ကျောင်းကို ခေါ်ခိုင်းနေသည် ။ ဗိုလ် မှူးကပ်ကျောင်းရဲ့အသိမိတ် ဆွေပဲ ဖြစ်မှာပဲ။ ကျွန်တေ်ာက ထိုသို့ တွေးမိပြီး သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်သည် ။
“ကောင်းပြီ ဗိုလ် မှူးကိုခေါ်ခဲ့မယ် ၊ ခင်ဗျားဒီမှာ ခဏနေခဲ့ပါ”
သူက ခေါင်းငြိမ့်ပြ၏ ထို့ကြောင့် ကျွန်တေ်ာသည် တပ်ရင်းရုံးသို့သွားပြီး ဗိုလ် မှူးကပ်ကျောင်းကို သွားခေါ်ရ သည် ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းရောက် ၍ သူ့ကိုပြန်ကြည့် တေ့ာဝါးလုံးတန်းအနီးမှာ သေသေချာချာရပ်ယင်း မရယ် မပြုံး လှမ်းကြည့် နေလေသည် ။ ဗိုလ် မှူးကပ်ကျောင်းထံ သတင်းပို့တေ့ာသူထလိုက်လာသည် ။ ဗိုလ် မှူးကြည့် ရတာ မျက်လုံးပြူး၊ မျက်ဆံပြူးနှင့်ဖြစ်နေ၏။ တပ်ရင်းရုံး အထွက် မှာ လှမ်းကြည့်လိုက်သည် နှင့် သူသိလိုက် ပါပြီ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တေ့ာကို ချက် ခြင်း အမိန့်ပေးလိုက် ၏။
” ဟေ့ .. အဲဒါ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းပဲ။ တိုက် ချွန်း ကင်းတပ်ဖွဲ့တန်းစီ အလေးပြုပါ”
ကျွန်တေ့်ာငယ်ထိပ်မြွေပေါက်လျှင်တောင် သည် မျှထိတ်လန့်မည် မဟုတ် ပါ။ ယခုတေ့ာကြုံရသည့် ဖြစ်အင်ကြောင့် ကျွန်တေ်ာခေါင်းနားပန်းကြီးသွားသည် ။ ရုတ်တရက် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်သွား၏။ သို့သေ်ာချက် ချင်း သတိပြန်ဝင်လာသည် ။ သို့နှင့် ကင်းတပ်ဖွဲ့သို့ ပြေးသွားပြီး ချင်းဘာသာဖြင့် အေ်ာ၍အမိန့်ပေးလိုက် ရသည် ။
ကင်းတပ်ဖွဲ့ တန်းစီပြီး ခဏတွင် ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဗိုလ် မှူးကပ်ကျောင်းတို့နှစ်ဦး တပ်ရင်းဝမှ လမ်းလျှောက် ၍ ဝင်လာကြသည် ။ သူတို့နှစ်ယောက် ကျွန်တေ့ာရှေ့ရောက် ၍ ရပ်ကြည့် နေတေ့ာမှ ကျွန်တေ်ာထပ်၍ အမိန့်ပေးရပြန်သည် ။
“ဂျ င်နရယ်ဆလု၊ ပရဲဆန့်အမ်း”
” ဗိုလ်ချုပ်ကို သေနတ်မြှောက် အလေးပြု”
တပ်ဖွဲ့မှ သေနတ် မြှောက် အလေးပြုသည်ကို ဗိုလ် ချုပ်က အလေးပြုခံယူနေပြီး ပြုံးနေသည် ။ ပြီးတေ့ာတုတ် ကောက်ကို မြေမှာထောက် ခေါင်းကိုတချက်ညိတ်ယင်း၊ ကျွန်တေ့ာကို ပြုံးနှုတ်ဆက် ၏
“ကောင်းတယ် ရဲဘေ်ာ၊ မင်းတာဝန်ကျေ တယ် ၊ ရဲဘေ်ာဆိုတာ ဒီလိုမှပေ့ါကွ” …. တဲ့
သူကပြုံးပေမဲ့ ကျွန်တေ်ာကတေ့ာမပြုံးနိုင်ပါ။ မပြုံးနိုင်ရုံ မကဘယ်ကထွက်လာမှန်း မသိသော ချွေးသီး၊ချွေးပေါက် တွေကြောင့် ယူနီဖောင်း တခုလုံးရွှဲနစ်နေသည် ။ ဇောချွေးဆိုတာဒါပဲ ဖြစ်မည် ။ ရင်ထဲမှာ မတင်မကျ ။ တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ် မှူးကြီး ဖလင်နယ်လ်ကမ်း၊ ဒုတပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး ကပ်ကျောင်းနှင့်အတူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သည် ထိုနေ့နေ့လည်က စားရိပ်သာတွင် နေ့လည်စာစား၏။
ကျွန်တေ်ာဖြင့် ထိုနေ့က ကင်းစောင့်တာဝန်ယူနေရတာ စိတ် မပါတေ့ာပါ။ ကြုံခဲ့ရသော ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ရင်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့ဆွေးရသည် ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမကျေ မနပ်ဖြစ်သည် ။ ဘယ့် နှယ် ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်း တယောက်လုံးကိုမှ မသိခဲ့ဘူးတဲ့လား။
ငါတေ်ာတေ်ာညံ့သေးလို့ပဲ။ အို… ငါည့တာံလဲ မဟုတ် ပါဘူးလေ၊ တာဝန်ကျေ အောင် ကြိုးစားခဲ့တာပဲ၊ ဗိုလ် ချုပ်က အသွင်ပြောင်းလာတာကိုး။ ကျွန်တေ်ာသည် ဒီကိစ္စကိုပဲ အတွေးသံသရာလည် နေသည် ။
ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးပါလိမ့်၊ ဘယ့် နှယ် ဗျာဗိုလ် ချုပ်တယောက်လိုမှ မလာခဲ့ပဲ။ တကယ်ဆိုရင် ဗိုလ် ချုပ်ဆိုတာ စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့၊ ကိုယ် ရန်တေ်ာနှင့် ရှေ့တပ်၊နောက်တပ်နှင့် ခန့်ခန့်ညားညား လာရမည် မဟုတ် ပါလား၊ ယခုတေ့ာခက်ကပြီ။
ဗိုလ်မှူးကပ်ကျောင်းကား စစ်စည်းကမ်းကြီးသူ၊ တာဝန်ကိုသိတတ်သူ၊ အထက်လူကြီးကိုရိုသေသူ၊ စစ်သား ကောင်း တယောက် ဖြစ်၏။ ထို့အတူ ဝတ္တရားချွတ်ယွင်းလျှင် အားမနာတမ်း အပြစ်ပေးတတ်သည် ။ ခုတေ့ာဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းကို တပ်ဝန်းအပြင်မှာ ရပ်ခိုင်းနေမှုကြောင့် ကျွန်တေ်ာတေ့ာမလွဲမသွေ အပြစ်ပေးခံ ရတေ့ာမည် ။ ရုံးတင်ခံရမည် ၊ ကွာတားအချုပ်ကျ တေ့ာမည် ။ မြတ် စွာဘုရား တကယ် ဒုက္ခပေးတဲ့ဗိုလ် ချုပ်ပါလား။ သို့သေ်ာအတွေးသည် အတွေးမျှသာ ဖြစ်၏။ တကယ် ဖြစ်မလာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းကျွန်တေ့ာကို ဒုက္ခပေးမသွားပါ။ ထိုနေ့ နေ့လည် ၁၂နာရီလောက်တွင် ဗိုလ် ချုပ်ရောက်လာပြီး နေ့လည်စာ စား၊ ဒုဗိုလ်ကြီးဖလင်နယ်လ်ကမ်းနှင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုပြီး၊ ညနေ၃နာရီတွင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်သွား၏။
အဲဗျ ပြန်တေ့ာမှ တကယ့် ဗိုလ် ချုပ်ဟန်ဖြင့် ပြန်ပါတေ့ာသည် ။ ဒုဗိုလ် ကြီးဖလင်နယ်လ်ကမ်းက ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းကို ရန်ကုန်အရောက်လိုက် ပို့၏။ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်း လာတုန်းက ဘာကားစီးလာသလဲ ကျွန်တေ်ာမသိရ၊ သူပြန်သွားတေ့ာဖြင့် ခန့်ညားစွာ လိုက်ပို့ပေးလိုက်လေသည်။
တပ်ရင်းဂိတ် ဝ အထွက်တွင် ကျွန်တေ်ာတို့ ကင်းတပ်ဖွဲ့က ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းကို အလေးပြုလိုက် ၏။ အလေးပြုခြင်းအား ဗိုလ် ချုပ် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြင့် ခံယူသည်ကိုကျွန်တေ်ာမြင်ရသည် ။ ထိုအခါမှ ကျွန်တေ့ာရင်ထဲက အပူလုံးကြီး ရုတ်တရက်ကျ သွားသည် ။ သို့သေ်ာဗိုလ် မှူးကပ်ကျောင်းက ဘာပြောဦးမလဲ စိုးရိမ်မိသေးသည် ။
ညနေကျ တေ့ာဗိုလ် မှူးကပ်ကျောင်းက ကျွန်တေ့်ာကိုခေါ်သည် ။ ကျွန်တေ်ာသည် ပြန်ပြောဖို့ စကားတွေ အလွတ် ရွတ်ဆိုကြည့်ရင်း ဗိုလ် မှူးထံဝင်သွားသည် ။ ကံအားလျေ်ာစွာပါပဲ ဗိုလ် မှူး အပြစ်မတင်ပါ။ ခွင့်လွှတ် သော အပြုံးဖြင့် ပြုံးပြယင်း သူပြောလိုက်တာက ” တိုက် ချွန်း မင်းက ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းကို မမြင်ဖူးဘူးလား ”
” ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ် မှူး မမြင်ဖူးပါဘူး ”
” အေးအေး … ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာ စိတ် အေးအေးထားပေ့ါ မမြင်ဖူးတေ့ာလဲ ဘယ်တတ် နိုင်မလဲ ”
ကျွန်တေ့ာဒုက္ခသည် မျှနှင့် ချုပ်ငြိမ်းသွား၏။ စိတ် အေးသွားလိုင်သည် မှာ ရင်ထဲကို ရေခဲရေ လောင်းလိုက် သလား ထင်ရသည် ။
ကိစ္စပြီးပြီ။ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းက င့ါကို အပြစ်မယူဘူးတဲ့။ အဟောသုခံ သြေ်ာ.. ချမ်းသာစွ .. ချမ်းသာစွ မောင်မင်းကြီးသာ
အသက် ရှည် ပါစေ၊ သက် တေ်ာရာကျေ်ာ ရှည် ပါစေ။ သို့သေ်ာကျွန်တေ်ာ၏ဆုတောင်း မပြည့် ခဲ့ပါ။
ကျွန်တေ်ာရခိုင်ပြည်တွင် တာဝန်ကျ နေစဉ်မှာ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံခံ ရသော သတင်းရေဒီယိုမှာ ကြားရသည် ။ ကျွန်တေ်ာသည် ကြားရသော သတင်းကိုရုတ်တရက် မယုံနိုင်၊ မဟုတ် ပါစေနဲ့ မမှန်ပါစေနဲ့ဟုတ်လည်းဆုတောင်းသည် ။ သို့သေ်ာဆုတောင်းဆိုတာ ပြည့် ချင်မှ ပြည့်တာပဲ။ မပြည့် ချင်တဲ့အခါ မပြည့်ဘူး မဟုတ်လား။ ယခုလည်းကျွန်တေ့်ာဆုတောင်း မပြည့် ပါ။ ဗိုလ် ချုပ်တို့ တကယ်လုပ်ကြံ ခံရပြီ။ ကျွန်တေ်ာသည် ထိုစဉ်က ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ရေတိမ်နစ်ရသော သတင်းကို ကြားရသောအခါ ဝမ်းနည်းကြီးစွာဖြင့် ရှိုက် ကြီးတငင် ငိုခဲ့မိသည်ကို ယခုပင် သတိရနေပါသေးသည်။
Via – တက္ကသိုလ် စိန်တင်၏ အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်းစာအုပ်မှ ကူးယူကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။ All credit goes to the original writer.
ကွာရှင်းပြီးတဲ့ နောက်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ….
May 28, 2019 MM Live
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကလေးပေါင်း ၁ သန်း တရားထိုင်နေတာပါ…မြန်မာနိုင်ငံလဲ အတုယူဖို့ကောင်းတယ်….